Muuri News Network » Degamda Marka oo looga Dhawaaqay Ururka Ilaallinta Shacabka SH/HOOSE iyo gudoomiyayaal Degmo..
Degamda Marka oo looga Dhawaaqay Ururka Ilaallinta Shacabka SH/HOOSE iyo gudoomiyayaal Degmo..
Oct 9, 2016 - Comments off
Degmada Marka ee xarunta Gobolk ashabeelaha Hoose ayaa waxaa looga dhawaaqay urur isbaheysi ah oo ay ku mideysanyihiin muaahidiin iyo Rag halgamaa ah oo dadka iyo deegaanada gobolka shabeelah hoose wax usoo qabtay magic iyo sumcadna k leh.
Ururka isbaheysiga ayaa waxaa loogu magacdaray Ururka Ilaalada Shacabka Shabeelaha Hoose, ujeedada loo aas aasayna waxaa ka mid ah sida ka muuqatay warqadda warsaxaafadeedka ay soo saareen ilaalinta shacabka iyo Deegaanada Gobolka shabeelha hoose.
Ururka ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyayaasha degmooyinka Marka, Afgooye iyo gudoomiyaha xarunta gobolka shabeelha hoose.
Gudoomiyaha ururka ayaa waxaa loo doortay Cabdullahi Waafoow oo ah Hogaamiyaha ruuxiga ee shacabka shabeelaha hoose waxaa kaloo xilalka kale loo magacaabay Maxamed Cismaan Yariisoow iyo Cabdiqani Booli Moog sida aad warqadda hoose ka arki doontaan.
Ururkan ayaa wxbadan katari doona shacabka dhibaateesan ee shabeelaha hoose hadii si sax loo dhaqangeliyo ujeedadiii loo aasaasay.